Offer Lens Optical, Optical Kuputira, Double Concave Lens Kubva China Mugadziri
Tsanangudzo:Lens Optical,Optical bemhapemha,Kaviri Concave Lens,Mufananidzo weOptics,,
 HomeProductsIdenderedzwa LensKaviri Concave Lens
Kaviri Concave Lens (Total 5 Products)
Zvigadzirwa zve Kaviri Concave Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Lens Optical , Optical bemhapemha vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Kaviri Concave Lens R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Kaviri concave lens ine maviri mukati mukati akakombama nzvimbo. Double Concave lens ine yakashata yakatarisana kureba. Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 /...
Kaviri concave lens ine maviri mukati mukati akakombama nzvimbo. Double Concave lens ine yakashata yakatarisana kureba. Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi N-BK7 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: +...
China Kaviri Concave Lens Vatengi
Bi-Concave (Double-Concave) lenses dzine radius yakaenzana ye curvature kune ese mativi e lens uye inoshanda zvakafanana kune plano-concave lenzi nekukonzera yakawiriranwa yechiitiko mwenje kuti iparadzane.
Double-Concave Lenses anoshandiswa mukuwedzera kwedanda, kudzikisa mifananidzo, kana kujekesa maficha ekushandisa. Aya malenzi zvakare akakosha ekuwedzera kureba kwekutarisa kweiyo optical system. Double-Concave Lenses, ane maviri concave huso, ari Optical maLens ane asina kunaka ekutarisa akareba.
Realpoo Optics inopa mbiri concave lens, uye iwo anowanikwa mune akati wandei anti-kuratidzira ekupfeka optics, kusanganisira MgF2, VIS 0 °, VIS-NIR, NIR I, kana NIR II, kuitira kugona kwakakwana muUliviviolet (UV), Inooneka, kana Infrared (IR) matunhu.
Lens Optical Optical bemhapemha Kaviri Concave Lens Mufananidzo weOptics Lesnes Optical